अलविदा थन्डरबर्ड: नमस्ते Sylpheed | लिनक्सबाट
अलविदा थन्डरबर्ड: नमस्ते Sylpheed
मेरो हालको डेस्कटपको लागि हल्का अनुप्रयोगहरूको लागि खोजी गर्दै (Xfce) मैले फेरि प्रयास गर्ने निर्णय गरें धेरै वर्ष पछि- एक मेल क्लाइन्ट भनिन्छ सिल्हीद.
म इमान्दारीपूर्वक यस ईमेल ग्राहकको आश्चर्यमा परेको छु। मैले यसको प्रयास गरें जब यो यसको प्रारम्भिक संस्करणहरू मध्ये एक थियो र मलाई यो पछाडि धेरै मनपर्दैनथ्यो। तर अब परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ र उत्तमको लागि।
शुरुवातकर्ताहरूको लागि योसँग मलाई सबै कुराको खाँचो पर्दछ र म प्रयोग गर्दछु थन्डरबर्ड, र अझ बढि:
ईमेल ठेगाना स्वत: समाप्ति।
यो ट्रेमा न्यूनतम गरिएको छ।
IMAP / POP / SSL / STARTSL का लागि समर्थन।
र यसले मलाई ईमेलहरू आयात गर्न अनुमति दिन्छ MBbox त्यसैले मसँग पहिले नै मेरा सन्देशहरू छन् थन्डरबर्ड en सिल्हीद.
यसलाई डेबियनमा स्थापना गर्नु टर्मिनल खोल्ने र राख्ने जत्तिकै सरल छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » अलविदा थन्डरबर्ड: नमस्ते Sylpheed
मित्र एक ट्यूटोरियल हेर्न को लागी म यो संग गर्न सक्छ को लागी विकासको साथ म कन्फिगर गर्न सकेन किनभने थन्डरबर्ड धेरै बढेको छ
Rastavallenato लाई जवाफ दिनुहोस्
एक सेटअप ट्यूटोरियल? तपाईको मतलब के हो?
के यो विन्डोजहरूको लागि अवस्थित हुनेछ ...?
हो, यो विन्डोज को लागी एक संस्करण छ:
त्यो <ª Hasefroch मा राम्रो छ
¬ ¬ उसले बलहरू ...
म XFCE स्थापना गर्दा निर्णय लिन यो सबै जानकारी बचत गर्दैछु।
धन्यबाद इलाव (अब सर्वोच्च गुरु)
हाहााहा तपाईलाई स्वागत छ ..
साथीहरु, मलाई तपाईबाट केही मद्दत चाहिन्छ र तपाईको विशाल अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै ...
म प्रोग्राम पग सिक्न चाहान्छु। वेब, म यसलाई लिनक्सबाट गर्न चाहन्छु तर म पूर्ण नौसिखा हुँ ... ..
मैले कहाँ सुरु गर्नु पर्ने केही सिफारिश।
अर्को कुरा यो हो… ..के यो इन्टरनेट कनेक्टिविटी बिना लिनक्स प्रयोग गर्न सम्भव छ…?
मलाई थाहा छ यो त्यस्तो ठाउँमा होइन जहाँ यो परामर्श लिनु पर्छ ... .. तर म निराश छु।
तपाईंले HTML, वेब लेआउटको लागि CSS अध्ययन गर्न शुरू गर्नुपर्नेछ, त्यहाँबाट PHP जस्तो सर्वर साइडको लागि प्रोग्रामिंग भाषामा जानुहोस् र जाभास्क्रिप्ट जस्ता ग्राहक पक्षमा। तपाइँ लिनक्सलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाइँ पृष्ठहरू आईईसँग मिल्दो बनाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईसँग विन्डोज हुनु पर्छ।
"अर्को कुरा यो हो ... ..के यो इन्टरनेट जडान बिना लिनक्स प्रयोग गर्न सम्भव छ ...?"
यदि सम्भव छ भने, यो हो, तपाईलाई अपाचे, nginx, लाइटटपीडी वा पीसी मा परीक्षकको साथ एक स्थानीय सर्वर चाहिन्छ, mysql, postgresql, mariadb वा सायद SQLite जस्तै पीएचपी जस्ता प्रोग्रामिंग भाषाको साथ डाटाबेस प्रबन्धकको साथ। LAMP हो। भने), वा सजिलैसँग XAMPP प्रयोग गर्नुहोस् जसले सबै कुरा एकीकृत गर्दछ र xD प्रयोग गर्न सजिलो गर्दछ। यो सबै स्थापना गर्न तपाईंलाई इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दछ तर त्यहाँबाट अधिक छैन।
pd: तपाइँलाई विकास गर्नको लागि आईडीई चाहिन सक्छ, तर तपाइँ केही सादा पाठ सम्पादक, जस्तै gedit, पत्तीपत्र आदि प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ (यसमा केटाहरूले तपाइँलाई अझ राम्रो सहयोग पुर्‍याउँछ 😉)
Jhals लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको उत्तर Jahs को लागी धन्यवाद ...।
माफ गर्नुहोस् ... जब मैले इन्टरनेट जडान बिना लिनक्स प्रयोग गर्ने कुरा गरेको थिएँ, तब मैले यसलाई नेटिभ अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको थिएँ।
म यो सोध्छु किनकि मैले याद गरें कि हरेक चोटि मैले इन्टरनेटबाट यूबन्टो स्थापना गर्छु र जे पनि इन्स्टल गरें, मँ पहिले पिन लिनक्स (यसको कुनै वितरण) लिन चाहन्छु, तर घरमा दुर्भाग्यवस मसँग इन्टरनेट छैन। ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने म तपाईंलाई मेरो सम्पर्कमा राख्न चाहन्छु।
मँ बुझ्छु तपाई के भन्न खोज्नु भएको छ र भाग्यले तपाईको लागि, तपाईसंग धेरै समाधानहरु छन्। मसँग विषयको बारेमा कुरा गरिरहेको एक लेख छ।
ठिक छ, इन्टरनेट बिना स्थापना गर्न को लागी elav यो तपाइँलाई पूर्ण समाधान दिनेछ, तपाइँ हाहा देख्नुहुनेछ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं मलाई थप्न चाहानुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै समस्या छैन, तर मलाई थाहा छैन यदि तपाईं यहाँ मेल छोड्न सक्नुहुन्छ haha, समान elav उसले भन्छ कि कुनै समस्या छैन, मलाई आफ्नो छोड्नुहोस् र म तपाईंलाई थप्छु र हामी च्याट गर्दछौं।
P.S: elav DesdeLinux को "ट्विटर" का लागि आमन्त्रित हुन सक्छ? 😀। अग्रिम धन्यवाद 😛
तयार छ, मैले यस निम्ता पठाएको छु 😉
स्थानीय रिपोको बारेमा (जुन समाधान हो हेयरोस्भ) हाहा, यहाँ हाम्रो देशमा यो हामीले धेरै प्रयोग गर्ने चीज हो, किनकि घरमा ईन्टरनेट एकदम सामान्य कुरा होइन, त्यसैले हामीले घरमा स्थापना गर्न रिपो वा मिनी-रिपो गर्नु पर्छ 😀
जो कोही आमन्त्रित चाहन्छ, केवल ईमेल पठाउनुहोस् विषयको साथ सम्पर्क फारम प्रयोग गरेर। DL.NET।
म छिट्टै उबन्टु / डेबियनमा कसरी पारंपरिक वेब सर्भर (अपाचे + MySQL + PHP) स्थापना गर्ने बारेमा ट्यूटोरियल गर्नेछु।
महान! यो सिक्न उत्सुक भएका हामी सबैलाई ठूलो सहयोगी हुनेछ। पहलका लागि धन्यबाद। म यो सेवाको लागि धन्यवाद गर्दछु जब ट्यूटोरियल देखा पर्छ। सादर।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु यदि तपाईं वेब प्रोग्रामिंग जान्न चाहानुहुन्छ भने, स्पष्ट रूपमा आधारभूत (HTML) को साथ शुरू गर्नुहोस्, आधारभूत साधन / उपकरणहरू प्रयोग गरेर (सरल वर्ड प्रोसेसर जस्तै gedit, उदाहरणका लागि)।
त्यसो भए तपाई HTML + CSS को साथ राम्रो शैली दिन शुरु गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाईले फिट देख्नुभयो भने तपाईले शब्द प्रोसेसर छोड्नुहुनेछ र स्थापना गर्नुहोस् कोमोडो - सम्पादन गर्नुहोस्, ब्लू फिश वा त्यस्तै केहि, विकास IDE हरू (अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंलाई राम्रो र क्लिनर कोड राख्न मद्दत गर्दछ) हो।
नमस्ते। म नौसिना भन्दा अलि बढी छु, तर मैले केहि चीजहरू सिकेका छु र अझै सिकिरहेको छु। म तपाईंलाई भन्दछु कि वेब पृष्ठहरूको बारेमा, म प्रोग्रामिंग जानेको बिना धेरै चीजहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान्दछु। सर्वप्रथम, मैले सीएमएस कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नुपर्‍यो: मैले प्रयोग गर्ने एउटा वर्डप्रेस हो, तर वर्चुअल क्लासरूमको लागि मूडल पनि हो। WordPress प्रयोग गर्न सजिलो छ र धेरै बहुमुखी।
त्यस बाहेक, तपाईंले होस्टिंग सेवा भाँडामा लिनुपर्दछ यदि तपाईं आफ्नै डोमेनहरू चाहानुहुन्छ भने: yourdomain.com, उदाहरणका लागि। तपाईं त्यो उन्माद कि mania थाहा छैन! मसँग डोमेन एक्स्टेन्सन .com, .org, .net, .mx, .fr, .us, .info का साथ पृष्ठहरू छन् र अर्को वर्ष म .tv र .pro को लागी जाँदै छु। तर सावधान रहनुहोस्, कहिलेकाँही राम्रो होस्टिंग कम्पनी छनौट गर्नु सजिलो हुँदैन। मैले भाडामा लिएको पहिलो घृणित थियो; एक ले अब मलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट। मैले एक पुनर्विक्रेता योजना भाँडामा लिएको छ र मैले साथीहरुलाई आफ्नो पृष्ठहरु पनि सेट अप गर्न संसाधनहरु दिएँ।
यी सबै पछि, म तपाइँलाई स: तिनीहरू सुरक्षित र धेरै राम्रा छन्। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। मेरो पृष्ठहरु पेशेवर थिमहरु को लागी धेरै राम्रो र सुरुचिपूर्ण धन्यवाद देखिन्छ।
तपाईंले MySQL डाटाबेसहरू र केहि PHP को बारेमा केही चीजहरू जान्नुपर्नेछ, तर केहि जटिल छैन। अन्तमा, तपाईंको आफ्नै होस्टिंग र डोमेनहरू राखेर तपाईं Google अनुप्रयोगहरूलाई एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको आफ्नै ईमेल खाताबाट जीमेलको मजा लिन। त्यो हो: तपाईंसँग yourdomain.com र तपाईंको ईमेल छ ईमेल@yourdomain.com र मानौं यो एक जीमेल ईमेल हो।
"लिनक्सबाट वेब पृष्ठहरू बनाउने" को रूपमा, जुन सर्वरसँग पहिले नै गर्नुपर्‍यो। मैले यहाँ भनेको छु र तपाईले इन्टरनेट र कुनै पनि अपरेटि operating प्रणालीको साथ कम्प्युटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाइँको होस्टिंग कम्पनी एक हो जुन तपाइँको साइटलाई सर्वरमा होस्ट गर्दछ, यो विन्डोज वा लिनक्स हो। पहिलो कम्पनी मैले प्रयोग गरेको विन्डोज र प्यानल (जहाँ वेबसाइट प्रबन्ध गरिएको छ) जुन मलाई पटक्कै मनपर्दैनथ्यो। मेरो हालको कम्पनी दुबै प्रस्ताव गर्दछ र मैले लिनक्स छनौट गरे - कुनै समस्या छैन। थप रूपमा, तिनीहरू सीपनेलसँग काम गर्छन्, धेरै सहज र प्रयोग गर्न सजिलो।
खैर, यो छ। साहस: तपाईको इच्छा पूरा गर्न असम्भव छैन, तपाईलाई यो चाहना को लागी मात्र जान्नु हो र यसमा समय समर्पण गर्नु हो। तपाइँलाई मद्दत गर्न धेरै अनलाइन जानकारी छ। म YouTube मा भिडियो सिफारिश गर्दछ: धेरै व्यक्ति वेब पृष्ठहरू कसरी बनाउने भनेर सिकाउन भिडियो ट्यूटोरियलहरू अपलोड गर्दछन्।
आह, त्यहाँ जिमडो जस्तै अन्य सेवाहरू छन्, ज्ञान र सबै कुरा बिना नै एक वेबसाइट सिर्जना गर्न जुन मैले भने। यो सहज र टोलीको काम धेरै "राम्रो" छ। तर यदि तपाईं आफ्नै डोमेन चाहनुहुन्छ भने, यो महँगो छ; मैले व्यावसायिक प्याकेजको लागि भुक्तान गरें र यो एकदम राम्रो थियो। यदि यो जिमडोको लागि होईन भने, म अझ सिक्न चाहान्छु र आज मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा प्राप्त गर्न चाहन्थें।
धन्यवाद साथी हो…। म काममा तल झर्दै छु ... .. डाउनलोड म्यानुअलहरू ... .. यो हुन्छ जुन मेरो देश (डोमिनिकन रिपब्लिक) मा पाठ्यक्रम महँगो हुन्छ, र अहिल्यै म यो गर्न सक्षम हुनको लागि तलब कमाउँदिन ...।
मेरो LMDE मा पोष्टरको प्रयोग गरेर, म "साधारण ..." अनुप्रयोगहरू मन पराउँछु =)
Coolito लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले पोस्टलर प्रयोग गरेको छु, तर यो मेरो मनपर्नेको लागि अझै हरियो छ र मलाई चाहिने सबै छैन।
फ्रान्सिस्को मार्टिन भन्यो
तपाइँको जानकारी को लागी धन्यवाद। मेरो प्रश्न यो हो:
म स्थानीयमा कसरी सन्देशहरू भण्डार गर्न सक्छु? म यो विकल्प पाउन सक्दिन, यदि यो एक छ भने। म विन्डोजमा काम गर्छु।
फ्रान्सिस्को मार्टिनलाई जवाफ दिनुहोस्
अभिवादन फ्रान्सिस्को। जब म यो मेल क्लाइन्ट प्रयोग गर्दछु, यदि म स्थानीय सन्देशहरू भण्डारण गर्न चाहन्छु, तब म POP3 खाता कन्फिगर गर्दछु। अब मलाई विन्डोजमा थाहा छैन कि मैले यो कन्फिगरेसन कहाँ सुरक्षित गर्ने थिएँ।
तपाईको द्रुत जवाफको लागि ईलाभलाई धन्यबाद।
मैले बुझें कि मैले POP खाता सिर्जना गर्नुपर्नेछ र सन्देशहरू त्यस खातामा सार्नु पर्छ। के यो साँच्चिकै हो?
तपाइँको दयालु को लागी पुन: धन्यबाद।
ठिक छ, सिल्फिड थन्डरबर्डबाट सन्देशहरू आयात गर्न सक्षम छ, यद्यपि सबैभन्दा सामान्य कुरा यो हो कि तपाईं सबै सन्देशहरू सर्वरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ र तिनीहरू स्थानीय हुन्छन्। संक्षेप मा यो त्यो हो, जब तपाईं पीओपी खाता सिर्जना गर्नुहुन्छ सन्देशहरू तपाईंको हार्ड ड्राइभमा भण्डार हुनेछ।
तपाईलाई स्वागत छ ^^
उत्कृष्ट !! मैले भर्खरै प्रयास गरेँ, र यो वास्तवमै हल्का छ, मैले ठन्डरबर्डको प्रयोग ठ्याक्कै यस्तै कारणले गर्दा रोकें, समय बित्दै जाँदा र जीनोमलाई यत्ति भारी महसुस भयो। आर्कमा LXDE प्रयोग गर्ने तरीकाबाट, र प्रदर्शन मेरो email ईमेल खाताहरूको लागि उत्कृष्ट छ।
हेवीनेटोललाई जवाफ दिनुहोस्
Sabayon Linux v7 का लागि नयाँ आईएसओहरू
लिनक्स टकसाल अधिक लोकप्रिय हुन्छ